Khaladaadka 757 Diyaaradaha.cfg
Khaladaadka 757 Diyaaradaha.cfg Bilood 3 2 maalmood ka hor #1757
Ma aqaan in cidi ogaatay laakiin khaladaad ku jira 757-200 Aircraft.cfg oo gadaal ka riixaya isticmaalka shidaalka isla markaana la dagaallama dhaqdhaqaaqa.
Hadda waan saxay kuwan waxaanan ku lifaaqey saxitaannada si aan u guuriyo oo aan ugu dhajiyo faylka .cfg, waxaan sidoo kale ku lifaaqey fayl buuxa oo Aircraft.cfg ah si aad u aragto meesha wax walba loo baahan yahay in la dhigo.
Waxaan rajeyneyaa inay tani caawinayso, duulimaad farxad leh.
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray PAUL1984. Sababta: iloobey inaad kudarto galitaanka